ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကြီးအကျယ်အကျိုးဆက်များ။ Dr. Ursula Ofman (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ပျက်စီးမှုများအကျိုးဆက်များ။ ဒေါက်တာ Ursula Ofman (2016)
Richard Simmons III မှ - ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် - အိမ်ထောင်ရေး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးထွား ဆက်ဆံရေး
ငါနှင့်အတူပါသူမပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိတယ်စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးပုံပြင် shared အဘယ်သူသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိပါသည်။ သူတို့ကအသစ်, သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့၌နှစ်ဦးစလုံးအပျိုကညာနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, သူတို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီး၏ပထမဦးဆုံးညဉ့်တွင်, ခင်ပွန်းလိင်ဖျော်ဖြေနိုင်ဘူး။ သူတုံ့သူနှစ်ပေါင်းညစ်ညမ်းအပေါ်ချိတ်ဆက်ခဲ့ခိုလှုံ။ သငျသညျခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးအဖြစ်သင့်အလွန်ပဌမနေ့၌သင့်အိမ်ထောင်သို့လှဲချခံနေရထိုကဲ့သို့သောအတားအဆီးရှိခြင်းစိတ်ကူးနိုင်သလား? ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, စုံတွဲရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုသူတို့အဘို့အမျှော်လင့်ခဲ့က start မှပယ်သည်မဟုတ်။
အခြားမြင်ကွင်းတှငျကြှနျုပျတို့ကမ်ဘာပျေါမှာအမြားဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးမြား၏တဦးတည်းယနေ့နှင့်အားကစားပုံ Swimsuit Edition ကို၏အဖုံးပေါ်တွင်သုံးကြိမ် featured ဖြစ်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်စဉ်းစားစူပါ Christie က Brinkley, ရှာပါ။ သို့မဟုတ်မ may ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့သူ့ရဲ့ကိစ္စမှလှူဒါန်းခဲ့ကြပေမည်သည့် $ 3,000-a-တစ်လ porn အလေ့အထ, စွဲခဲ့တဲ့ Brinkley လက်ထပ်ဗိသုကာပတေရုသကွတ်။ Cook ကကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှလက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲ, မိမိအိမ်ထောင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်, မိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ porn မှကြည့်ရှုကြ၏။
အတွေ့အကြုံကောင်းစွာမှတ်ယူတိုင်ပင်မကြာသေးမီကကြောင်းညစ်ညမ်းစွဲလောကီသားတို့သည်အထဲတွင် 500 ပေါင်ဂေါ်ရီဖြစ်ပါတယ်ပြောတယ်။ သူကအခြားသူများထံမှဖုံးကွယ်ရန်လွယ်ကူကြောင်း commented ကျော်လွှားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်, သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်သင့်အနာဂတ်လိင်ဘဝအပေါ်အကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ အတော်များများကလုလင်တို့နှင့်ပင်အချို့သောငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးများ, ညစ်ညမ်းဖို့အကြီးအကျယ်စွဲကောလိပ်မှဘွဲ့ရနေကြသည်။ ကျနော်တို့သာယခုညစ်ညမ်းပုံမှန်အသုံးပြုသူများအနှစ်တစ်အရေအတွက်ကကြည့်ရှုအားပေးကြသူအထူးသဖြင့်သူတို့အားသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုနားလည်ရန်စတင်နေကြသည်။
ညစ်ညမ်းကြောင့်လောင်ပေမယ့်လူတွေကိုသူတို့မြင်သောအရာကိုလွှမ်းမိုးမှုမခံရဟုတူသောသူတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာငြင်းတဲ့သူတွေကိုထောက်ခံသူတွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းဝမ်းမြောက်စွာအဘယ်အရာကိုသင်မြင်သင်မည်သူနှင့်သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုထိခိုက်, သင့်စိတ်ထဲနှင့်နှလုံးထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခြင်းမရှိဘဲ, သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
လိင်ကုသနှင့်ပညာတတ်များ Wendy နှင့်လာရီ Maltz "ရေတွင်း-မှတ်တမ်းတင်စာအုပ်ရေးသားအဆိုပါ Porn Trap။ "ဒီအရေးအသားကိုသူတို့ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်း၏အဖျက်အင်အားစုအကြောင်းကိုကြားလျှင်လူတွေအံ့အားသင့်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုမျှဝေပါ။ အတော်များများကအန္တရာယ်ကင်းပျော်စရာဖြစ်စေ့စေ့ဆင်ခြင်ကြလော့ ကမူးယစ်ဆေး, အရက်မသောက်သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ဘယ်လိုဒါအဖျက်နိုင်သနည်း အဆိုပါ Maltzes ကြောင့်ဤလမ်းကိုတင်:
ညစ်ညမ်းဦးနှောက်ဓာတုဗေဒအပေါ်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါဟာအဖြစ်လူသိများဦးနှောက်ဧရိယာ, လှုံ့ဆော် "hedonic အဝေးပြေးလမ်းမကြီး"မထွက်ရဓါတုဗေဒ dopamine တစ်စုံတစ်ဦးကလိင်နှိုးဆွသောအခါဖြန့်ချိသည်။ ညစ်ညမ်းဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ထုတ်လုပ်မှု၏ကြီးမားသောဆူးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အတော်များများကသုတေသီများညစ်ညမ်း၏မြင်ကွင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ dopamine အတွက်သိသိသာသာတိုးအက်ကွဲကိုကင်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတွေ့ကြုံမြင့်မားသူတစ်ဦးဦးနှင့်ဆင်တူကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
အဆိုပါ Maltzes နောက်ထပ် add:
, စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အတွေ့အကြုံများကိုထုတ်လုပ်ရန်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်နာကျင်မှုထဲကနေမှလွတ်မြောက်ရန် porn ရဲ့ပါဝါကအလွန်အမင်းစွဲလမ်းစေ။ အချိန်ကျော်သငျသညျအကောင်းခံစားမိနှငျ့သငျဆိုးမခံစားရဘူးဒါကြောင့်မလိုအပ်ဖို့ကအပေါ်မူတည်မှလာနိုင်ပါတယ်။ တဏှာ, အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်အမြားအဖွစျလာနိုငျသုံးပြီးနှင့်အတူ Out-of-ထိန်းချုပ်မှုအပြုအမူ။ porn လိင်သင့်ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ဆီသို့မှန်မှန် porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြပါလျှင် "အမြင့်ဆုံးရ," porn ကနေဆုတ်ခွာရက်, ကင်းနှင့်အခြားခက်ခဲမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ detoxing အဖြစ်, လှုံ့ဆော်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အိပ်စက်မှုလျော့ကျနှင့်ပြည့်စုံအဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့, porn ပြန်လည်နာလန်ထူရှိလူများတစ်ဦးတည်းကသူတို့ dopamine receptors မှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ 18 လအတွင်းပျမ်းမျှယူပါ။
ညစ်ညမ်းအလွယ်တကူအစစ်အမှန်ဘဝနှင့်၎င်း၏နာကျင်မှုအားလုံးထံမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးလွယ်ကူသောထွက်ပေါက်ပေးနိုင်ပါသည်, သို့သော်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲအများအပြားသောပြဿနာများကိုအမျိုးအစားအားလုံးကို, ဖန်တီး, ဒါသူတို့အလေးအနက်များမှာသည်အထိသူတို့ကိုသင်လာမယ့်မမြင်ရ။ အများဆုံးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအကျိုးဆက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနှင့်မကြာခဏအဖျက်နည်းလမ်းတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပုံစံသွင်းသွင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
နောမိ Wolf ကယ့် New York ကမဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါး, "အဆိုပါ Porn Myth ဟာ"ပို့စ်များကိုဒီ:
သငျသညျ porn သောတိရစ္ဆာန် raving သို့ယောက်ျားလုပ်လိမ့်မည်ဟုထင်လိမ့်မယ်။ ဆန့်ကျင်တွင်, porn ၏တိုကျခိုကျမှုကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတွေကိုစပ်လျဉ်းအထီးလိင်စိတ် deadening နှင့်ညစ်ညမ်းထိုက်တန်အဖြစ်နည်းပါးလာခြင်းနှင့်နည်းပါးလာအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ဖို့ယောက်ျားဦးဆောင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများနေ့ porn crazed ယောက်ျားချွတ်ကာမိမိဘာသာအားကိုးရှိခြင်းကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာရုံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်ခက်အချိန်ရှိခြင်းနေကြသည်။
ဒေါက်တာ Ursula Ofman တစ်မန်ဟက်တန်-based လိင်ကုထုံး, များစွာသောလုလင်တို့သည်မိမိတို့၏ညစ်ညမ်း-related ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. chat ဖို့အတွက်လာမယ့်မမြင်စဖူး။
ဒါသုံးစွဲနိုင်မယ့်, ယခု, ဗီဒီယိုနှင့်ဘျ streaming ကဲ့သို့သောအရာများနှင့်အတူ, ယောက်ျားတွေဟာအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူသို့စို့တဲ့နေကြသည်။ အဘယ်အရာကိုအများဆုံးဝမ်းနည်းဖွယ်ရာရဲ့တကယ့်မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါမိန်းမနှင့်နှိုးဆော်ခြင်းရမရနိုငျသောသူသည်နောက်ကျအချို့လုလင်တို့သည်မြင်ကြပေမယ့်အင်တာနက်ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်မျှပြဿနာရှိပါတယ်။
သူမ၏ကောင်းစွာသုတေသနပြုစာအုပ်ထဲတွင်သတင်းစာဆရာ Pamela ပေါလုသည်, "Pornified"says:
တချို့ယောက်ျားမိမိတို့ခေါင်းပေါ်အတွက်သီးခြားညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောလိင်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်, ကဒါမလွယ်ကူပါဘူးင်; ညစ်ညမ်းတခါတရံမမျှော်လင့်ဘဲနည်းလမ်းအတွက် seeps ။ အဆိုပါကျူးကျော်ပင်ထိုကဲ့သို့သောခွန်အားမရှိခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
လိင်ကုထုံးနှင့်စိတ်ပညာရှင် Alin Zoldbrod လုလင်တစ်ဦးကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောချစ်သူများဖြစ်လတ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်အများကြီးလူတို့သည် porn ကြယ်ပွဗီဒီယိုကိုပြုကြအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ယူဆ။ Zoldbrod သူတို့တစ်တွေရိုင်းစိုင်းနိုးထဘို့အတွက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်မိန်းမအားပြန်ပြောပြဖို့ဘယ်လိုသိကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောချစ်သူများစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
"သူမ၏စာအုပ်ထဲတွင်မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?သူတို့လက်ထပ်ကြသောအခါ porn နှင့်အတူသူတို့၏ပြဿနာများနှင့်ပြဿနာကိုသွားလတံ့သောယုံကြည်ချက်: "Dannah Gresh အများဆုံးလူငယ်များညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုရှိဘုံမောဟအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အဘယ်သူ၏စေ့စပ် porn အပေါ်ချိတ်ဆက်နေသောအမျိုးသမီးငယ်ဆက်ဆက်ကြောင်းမှန်သည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ Gresh ဒီသူမကလူငယ်များအနေဖြင့်ရရှိသွားတဲ့နံပါတ်တစ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကပြောပါတယ်။
porn စစ်မှန်သောအချစ်နှင့်စစ်မှန်သောလိင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့နီးပါးဘာမျှရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ဒါပေမယ့်, porn များ၏မြှူအိမ်ထောင်ရေးလိင်အားဖြင့်မီးမငြိမ်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်" ဟု Gresh "ကထပ်ပြောသည်။ ဒါဟာအတုနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့အတုပါပဲ။ "
ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများမှာတော့စာရေးဆရာ Nate လာကင်တပ်မက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဦးသေဆုံးနေသောကြောင့်ညစ်ညမ်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားအားလုံးဆက်ဆံရေး corrodes ကြောင်းပေး။ ဤတွင်လာကင်ကနေပြောရာမှာကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
မတ်ေတာသပေးသည်; တပ်မက်သောစိတ်ကြာပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုမြင်; တပ်မက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြင်သည်။ အချစ်ဆိုတာသင်အကြောင်းကိုဖြစ်၏ တပ်မက်သောစိတ်ကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒပြည့်အကြောင်းပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတတ်၏ ... သိတယ် ... အရိုအသေ။ တပ်မက်သောစိတ်လျော့နည်းဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။
အောက်ခြေလိုင်းကဒီဖြစ်ပါသည်: porn ညျဝါကိုချစ်မဟုတ်ဘဲကိလေသာစိတ်။ တပ်မက်သောစိတ်ကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်ကျေနပ်မှုအကြောင်းပါ။ အဆုံး၌, porn ဆက်ဆံရေးနှင့်ချစ်ခြင်းဖျက်ဆီး။ ယင်း၏သက်ရောက်မှုအကြီးအကျယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူမိဘတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် (ငါသည်သင်တို့ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်နိုင်ခြေကို၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်းသိလို။ ငါသည်သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်အတူအလွန်တက်ကြွသောဖြစ်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ငါ၏ဘဝထဲသို့ကျန်းမာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ထားရန်မိဘများကိုစိန်ခေါ် အစဉ်မပြတ်သူတို့နှင့်အတူသင်ကြားမှု၏ဤကြင်နာမျှဝေနေဖြင့်မိမိတို့၏ကလေးများ။ )